‘एक्सप्रेस कमेडी टुर’ लिएर ‘छक्का पन्जा २’ युनिट पोखरामा | Jukson
गीतमा भएको विवाद मिलिसकेको निर्माण पक्षको दाबी
मोफसल प्रचार राम्रो भयो भने ब्यवसाय पनि सफल हुने पछिल्लो समय रिलिज भएका केही चलचित्रले देखाएका छन् । सायद त्यसैले पनि होला पछिल्लो समय रिलिज भएका र हुन लागेको जुनै चलचित्र पनि प्रचारप्रसारका लागि टोलीसहित आकर्षक कार्यक्रम बनाएर मोफसलको दौडमा निस्किने गर्दछ ।
यस्तैमा ११ असोजबाट सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउने चलचित्र ‘छक्का पञ्जा २’ युनिट पनि मोफसलको दौडमा निस्किएको छ । बिजया दशमीको फुलपातीबाट एकल प्रदर्शनमा आउन लागेको यो चलचित्र जम्बो टोलीसहित मंगलबार पोखरामा आईपुगेको छ ।
मंगलबार चलचित्रको प्रचारको लागि पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चलचित्रका निर्देशक दिपा श्री निरौला, निर्माता तथा कलाकार जितु नेपाल र केदार घिमिरेले पत्रकार खुबै हसाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निर्देशक दिपा श्री निरौलाले ‘छक्का पन्जा २’ विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक चलचित्र भएको बताईन् । चलचित्रका निर्माता तथा कलाकार जितु नेपाल ( मुन्द्रे ) ले एपटा सपना बोकेर शहर पसेको पण्डित भूमिका आफ्नो भूमिका रहेको बताउँदै युवा पुस्ताको कथा फिल्ममा समावेश गरिएको बताए । उनले फिल्मको गीमा जुन विवाद रहेको छ त्यो मिलिसकेको बताउँदै गीतमा भएको गल्ती स्विकार गरे । अर्का निर्माता तथा कलाकार केदार घिमिरेले आफुहरु कुहिरोको काग बनेको बताउँदै गीतको विषयमा गीत सर्जक अल्मोडाले नबोलेसम्म सत्यतथ्य कुरा बाहिर नआउने बताए । मुद्धामामिला नभएको हिसाबले गीतमा भएको विवाद एउटा चर्चा र अर्को सृष्टाको नाम नआएकोले हुन भएको बताए ।
निर्देशक निरौलाले भनिन्— हामीले स्रष्टासँग बसेर छलफल गरिसक्यौँ, गीतमा हामीले स्रष्टाको नाम पनि समावेश गरिसक्यौँ, अहिले त्यो विवाद मिलिसक्यो । ‘‘झ्याम्म—झ्याम्म’’ गीतको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा भने निरौलाले सबैजनासँगको सोधपुछ पनि मात्र गीत निर्माण गरेको बताईन् । आफुहरुले यो गीत फिल्ममा समावेश गरेर लोकसंस्कृति बचाउने काम मात्र गरेको तर कपी नगरेको उनले बताईन् । ‘‘झ्याम्म—झ्याम्म’’ गीत जस्ले पनि निकाल्न सक्ने उनको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमै सहभागी गायक हेमन्त शर्माले संसारमा जुतिसुकै कपी राईटको कुरा गरे पनि स्पष्टता नआएको बताए । ‘‘झ्याम्म—झ्याम्म’’ गीत निर्माणमा निर्माण पक्षको कुनै इन्टेनसन नदेखिएको उनले बताए ।
टोलीले बिहिबारबाट आफ्नो मोफसल प्रचार सुरु गरेको हो । ‘एक्सप्रेस कमेडी टुर’ नाम दिएको प्रचारमा दमकबाट सुरु भएको हो । टुरमा चलचित्रकी निर्देशक निरौलाको साथमा जितु नेपाल, केदार घिमिरे, प्रियंका कार्की, वर्षा रावत, स्वस्तिमा खड्का, स्वरुपपुरुष ढकाल र गायत हेमन्त शर्मा लगायत सहभागी छन् ।
सोही अवसरमा चलचित्रको ‘‘ए दाजु नसमाउ नाडीमा’’ बोलको गीत हेर्ने यू—टुवमा १ करोड भ्यूवर्स पुगेको अवरमा केक कोटर सेलिब्रेसन गरिएको थियो ।
Video : Nicholas Gurung / jukson.com
See more Photos : http://jukson.com/event/715/chhakka-panja-2-comedy-tour-pokhara ( Click the Link )
लायन्स क्लव पोखरा युनाइटेड चौतारीद्वारा अक्षयकोष स्थापना
सुनकाण्डमा कहाँ–कहाँ चुके दिवेश लोहनी ? के भन्छन् सफाइमा ?
बसन्तपुरमा ईंटा पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री